Wiko dia manolotra Android roa hafa: Wiko Harry 2 sy Wiko View 2 Plus | Androidsis
Ny marika frantsay no mivarotra azy ary mitondra antsika izao telefaona Android roa vaovao: ny Wiko View 2 Plus sy Wiko Harry 2. Vitsy izao no nanambara ny Wiko View 2 Go, izay miresaka momba ireo andalana ireo eo afovoantsika isika.
Io dia ao amin'ny IFA izay natolony telefaona telo izay amin'ity fidirana ity dia miresaka ireo teny roa isika. Ny smartphone dia mifandanja tsara amin'ny vidiny sy amin'ny kalitao ary ny endrik'ireo singa ao aminy.
Ny Wiko View 2 Plus no terminal izay tonga tahaka ny zokin'ny Wiko View 2 Plus. Izy io dia miaraka amin'ny efijery 5,932-inch miaraka amin'ny tahan'ny famolavolana 19: 2 HD Plus, processeur Qualcomm Snapdragon 450 valo-core amin'ny hafainganan'ny famantaranandro 1,8 Ghz sy 4GB an'ny RAM.
Tsy tsy ampy koa io 64 fahatsiarovana anatiny ary bateria 4.000 mAh hanome anao ady ampy mandritra ny andro. Ireo fakan-tsary koa dia miara-miasa mba hanolorany tarika roa ao aoriana miaraka amin'ny 12 MP + 12 MP, ary ny eo anoloana dia mahatratra hatramin'ny 8 megapixel.
El Wiko Harry 2 no zandriny miaraka amin'ny refy 5,43-inch 18: 9 HD + ratio, Mediatek MT6739WA quad-core chip dia niorina amin'ny 1,3 GHz sy ny RAM 2 GB. Izy no kely indrindra amin'ireo telo natolotra, dia tsikaritra ihany koa ao amin'ny fitehirizana anatiny miaraka amin'ny 16GB (miaraka amin'ny safidy microSD toy ny 2 Plus) ary bateria mijanona amin'ny 2.900mAh.
Tsy manokatra tarehy toy ny Wiko View 2 Plus, na dia misy SIM Dual aza toa ny zokiny lahy. Samy manana Android 8.1 Oreo hahitana anay miaraka amin'ny vidiny manomboka amin'ny 99 euro ho an'ny Wiko Harry 2 sy 199 euro ho an'ny Wiko View 2 Plus.
Finday vaovao roa avy amin'ny marika frantsay Wiko tonga voalanjalanja tsara amin'ny vidiny sy ny tsipiriany rehetra. Marika iray izay maka ny toerany hanehoana ny tenany ho iray amin'ireo orinasa eropeana lehibe indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Finday vaovao roa hafa avy amin'ny marika frantsay: Wiko View 2 Plus sy Wiko Harry 2